Cilmi-baadhis iyo Horumarinta Farshaxanka
Xarunta Anderson Center for Studies Interdisciplinary
Iyada oo loo marayo barnaamijkeeda gaarka ah ee degenaanshaha farshaxanimada iyo dhacdooyinka wacyigelinta bulshada, Xarunta Anderson ee Tower View ee Red Wing waa xarun cilmibaaris hal-iyo-nooc ah iyo farshaxan horumarin loogu talagalay fanka - xarunta kaliya ee nooceeda ah ee aagga shan-gobol loo hibeeyay. oo keliya abuurista farshaxanka iyo fikradaha cusub. Xarunta Anderson waxay heshaa taageero guud oo howlqabadka iyada oo loo maro barnaamijka Farshaxanka McKnight sababtuna tahay xarunta oo kaashaneeysa fanaaniinta shaqeeya, oo leh awood iyo nidaamyo ay ku hormariyaan oo ay la wadaagaan shaqadooda.
Xarunta Anderson Centre ayaa dhawaan martigelisay kulan guud oo bulshada ah oo ku saabsan dhibaatada sii kordhaysa ee kululaynta caalamiga ah. Cinwaankeedu yahay Xalka Cimilada ee garabka iyo Beyond, shirkii maalinlaha ahaa ayaa ka dhacay xarunta xarunta cusub ee dib loo soo celiyay. Dadka ku hadla martida waxaa ka mid ah Will Steger, calaamadeeye caan ah iyo aasaasihii ururka Will Steger Foundation; J. Drake Hamilton, Agaasimaha Siyaasadda sayniska ee Fresh Energy, oo ah urur aan faa'iido doon ahayn oo u doodaya siyaasadaha wax ku oolka ah ee ku saabsan isbeddelka cimilada; Julia Nerbonne, Agaasimaha Fulinta ee cutubka Minnesota ee Interfaith Power iyo Light, oo ah isbahaysiga diinta ee beelaha dhiira galinaya diinta diimeed ee kululaynta caalamiga ah; iyo James Lenfestey, oo hore uga tirsanaa guddiga tifaftirka Minneapolis Star Tribune, oo ka warramay sayniska cimilada tan iyo 1988-kii. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay dad ka badan 120 oo muwaadiniin ah oo ka soo jeeda Red Wing iyo beelaha ku hareeraysan ee kuyaala koonfur-bari iyo galbeedka Wisconsin.
Tan iyo markii la furay sannadkii 1995, iyo sanadkan oo lagu dabaaldegayay sannad-guuradii 20-aad, Xaruntu waxay ka go'an tahay mabda'a ah in farshaxanku uu kaalin muhiim ah ka qaato habka beesha.
Ilaa hadda, Xarunta Anderson Centre waxay marti-galisay in ka badan 750 farshaxan, qorayaal, iyo aqoonyahanno ka hadlaya 40 nooc oo kala duwan. Waxay bartilmaameedsadeen Xarunta laga soo bilaabo 40 dawladood iyo 35 dal oo ajnabi ah si ay u abuuraan ama dhammaystiraan shaqooyinka horey u socdey. Inkastoo ay degan yihiin, waxay la wadaagaan dabeecadooda iyo khibradahooda Red Wing iyo beelaha ku hareeraysan miyiga, iyaga oo bixiya fasallo, tababaro, iyo bandhigyo kale. In ka badan 50,000 oo qof, oo ka yimid carruurta dugsiyada hoose-dhexe ilaa muwaadiniinta waayeelka ah, ayaa ka faa'iideystey sannadihii barnaamijyada dadweynaha.